९१ वर्षको उमेरमा डिग्री हासिल ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ भाद्र २०७४, सोमबार ०५:१९ |
एजेन्सी । थाइल्यान्डकी किमलान जिनाकुले ९१ वर्षको उमेरमा स्नातक पढाइ पूरा गरेकी छिन्। उत्तरी थाइल्यान्डको लेन्पेंग प्रान्तको सबैभन्दा राम्रो स्कुलमा पढेकी किमलान आफ्नो स्कुलमा एक प्रतिभाशाली छात्राका रूपमा चिनिएकी उनी थप पढाइका लागि विश्वविद्यालय जान सकिनन् । केही समयपछि परिवार बैंककमा बस्न आएपनि उनको पढ्ने धोको अपुरै रह्यो । बैंकक आए लगत्तै परिवारले बिहे गरिदिएपछि उनले पढ्ने सपना त्याग्नु परेको थियो ।
किमलानले पहिलो पटक ७२ वर्षको उमेरमा विश्वविद्यालय भर्ना हुने निर्णय गरेकी थिइन्। तर, भर्ना भएको केही समयपछि उनकी एक छोरीको मृत्यु भयो। छोरीको वियोगमा शोकमा डुबेकी उनको फेरी पढ्ने सपना टाढा भयो ।
उनले फेरी विश्वविद्यालय भर्ना हुने साहस बटुलिन् र ८५ वर्षको उमेरमा ह्युमन इकोलोजी विषयमा भर्ना भइन् । किमलानले भनिन्– ‘जबमा दुःखबाट बाहिर आएँ, मैले आफूलाई उक्त विषय पूरा गर्ने दबाब दिएँ। म आशा गर्छु मेरी छोरीको आत्मा यो देखेर खुसी हुनेछ।’
उनी भन्छिन् , ” पढाइका क्रममा हरेक च्याप्टरको मुख्य बुँदालाई हाइलाइट गरेर पढ्थें । जब म पास हुन्थें, म खुसी हुन्थें। जब फेल हुँन्थें, म नराम्रो महसुस गर्थें। त्यसैले जबसम्म पास भइनँ, तबसम्म परीक्षामा सहभागी भइरहें।’ उनी थप्छिन्, ” यसका लागि कहिलेपनि ढिलो हुँदैन, मेरो मस्तिष्क सिक्नका लागि सधैं जागृत र तीक्ष्ण छ। यो विश्व कहिले पनि रोकिंदैन। यहाँ सधैं नयाँ समस्या हुन्छ र यदि नयाँ विज्ञान अगाडी नआएको भए यो विश्वले समृद्ध हुन छोडिसक्थ्यो ।”
Previousबराबरीमै रोकियो रियल मड्रिड !
Nextअष्ट्रेलियामा नेपालीहरुको सहज सुविधाकालागि ’नेपाल अन बोर्ड’ सेवा